Khilaaf Xoogan Oo ka taagan dhismaha Golaha deegaanka BuuloBurde – hareerley News
Dowlada Jabuuti Oo maanta diiwaan gelisay kiisaskii ugu badnaa oo cudurka Coronavirus ah
Posted on April 13, 2020 April 13, 2020 Author Hareerley News
(Dijabuuti ):Dalka Jabuuti maanta waxaa laga diiwaan geliyay kiisaskii ugu badnaa ee cudurka Coronvirus, tan iyo markii uu dalkaas ka dilaacay xanuunkan. Wasaaradda Caafimaadka ee dalka Jabuuti ayaa shaacisay in maanta la diiwaan geliyay 83 kiis oo cusub, waxaana la sheegay in dadka uu soo ritay cudurkaas ay badankood kasoo jeedaan gobolka Cali-Sabiix ee dalka […]
Maamulka Gobolka Banaadir Oo ka Jawaabey Cabasho ka timid Shacabka ku dhaqan Degmada Warta:(Daawo)
Posted on April 30, 2020 April 30, 2020 Author Hareerley News
Maamulka Gobolka Banaadir ayaa ka jawaabay cabasho ka timid shacabka ku dhaqan Degmada Warta Nabadda ee Magaalada Muqdisho, taasi oo la xariirta bur-burka wadada xiriirisa xarunta Degmada iyo Isgoyska Geed Jaceyl. Wadooyinka Magaalada Muqdisho ayaa Xiliyada roobka Aafeeya jidadka iyadoona dib u habeyn lagu Sameeyo laakiinse aan sidii la rabey mararka qaar loo sameyn. Halkaan […]
Giriigga oo Luxembourg u raray carruurta muhaajiriinta ah ee aanay cidna la socon
Posted on April 16, 2020 April 16, 2020 Author Hareerley News
Dowladda Giriigga ayaa bilowday inay dib u dajiso carruur aanay cidna wehlin oo ku sugnaa xeryo ay muhaajiriin buux dhaafiyeen oo dalkaas ku yaal. 12-kii canug ee ugu horreeyay ee ay da’doodu u dhaxaysay 11 ilaa 15 ayaa waxaa dib loogu dajiyay waddanka Luxembourg iyagoo laga qaaday jasiiradaha Lesbos, Samos iyo Chios. Giriigga ayaa qorshaynaya […]
Xafladda Caleema saarka Bugta ahaa Oo Dib loo dhigey Markale